Yintoni i-Instagram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Julayi 13, 2019 0 IiCententarios 899
Iinethiwekhi zontlalontle lusuku luphantse phantse uninzi lwabantu, kakhulu, basebenza njengephephandaba elingazange liphoswe rhoqo kusasa. Kwaye kule boom yamaqonga ezentlalo avelayo I-Instagram yenye yezona zidumileyo nezisetyenziswayo ngoku. Ngale ndlela kwaye njengabanye abaninzi, uya kuzibuza ukuba yeyiphi i-Instagram kwaye ixhaphake kakhulu ukuba unawo lo mathandabuzo kwaye ufuna ukwazi ngakumbi ngayo.
Kungenxa yoko le nto siza kukubonisa ngezantsi ulwazi oluninzi Kuya kufuneka wazi ukuba umtsha usebenzisa le sicelo, njenge, ukuba sele unexesha lokuyisebenzisa kodwa ufuna ukufunda okungakumbi kwi-Instagram.
I-Instagram yenethiwekhi yoluntu
Njengoko kukhankanyiwe kwisihloko yinethiwekhi yezentlalo, usetyenziso lweselfowuni olufumanekayo lwe-iOS kunye ne-Android, ukuya kwiphepha ukuba lisetyenziswa kwikhompyuter. Ikhutshelwe uluntu kwi-2010 ngabenzi bayo Kevin Systrom y UMike Krieger, impumelelo yayo yayiphindaphindeka kangangokuba yayinezigidi ezingaphezu kwe-100 zabasebenzisi ngokukuko kwe-2012 kwaye ngaphezulu kwe-300 yezigidi ze-2014. Ngenxa yoko, olu ngcelele enyanisweni lwabamba umdla kaMark zuckerberg ogqiba kwelokuba ayithenge ngaphezulu kwe-2012.
Ekuqaleni i-Instagram yayenzelwe i-iPhone, ngoko ke inkqubo ephezulu kune-3.0.2 iyafumaneka kwi-IP kunye ne-iPod. Kwaye i-Android eneenguqulelo eziphezulu kune-4.0. Ngale ndlela isicelo sikwazile ukufikelela kwi-900 yezigidi zabasebenzisi abasebenzayo, kwaye eli nani liyaqhubeka ukwanda inyanga nenyanga.
Ukusebenza kwe-Instagram ukulayisha imifanekiso, iifoto kunye nevidiyo. Kwakhona ivumela abasebenzisi bayo ukuba basebenzise ifoto ezinje ngeefreyimu, izihluzi, iindawo ezingaphantsi komhlaba kwiziseko zekhonkrithi, imibala ye-retro, ukufana okutsha kwaye wakube ugqibile ukuhlela ungakufaka umxholo kwinethiwekhi yoluntu okanye kolunye uhlobo njenge-Facebook, Tumblr kunye ne-Twitter.
Esi sicelo sigcina umlinganiso owahlukileyo kwaye kufanelekile ukuba unike imilo yesikwere kwiifoto ngokuhlonipha iikhamera ze-Kodak Instamatic kunye nePolaroid. Ngale ndlela, umlinganiso we-16: 9 kunye ne-4: I-3 yeyona ihlala ikwenza umahluko.
Emva koko ndiza kuqwalasela kancinane malunga neefilitha ezinesicelo kwaye zikhankanya ukuba zithathwe yipolioli.
UJuno: Ivumela iithoni ezifudumeleyo ukuba zime ngaphandle ngokufaka iithoni ezibandayo zibe luhlaza kwaye zenze ukukhanya kwabelungu.
Ukulala: Ukubonelela ngokulala, ukujonga kwakhona, ukuhambisa umfanekiso kunye nokongeza i-haze ngokugxininisa kwabamnyama kunye neeblues.
I-Lark: Khulisa iiblues kunye nemifuno, ubomvu obomdaka kwaye wenze imihlaba iphilile.
Aden: Inika imbonakalo yendalo yeeblues kunye nemifuno.
Crema: Shushu kwaye upholise ifoto ngombala wekhrimu.
Ihlala ihleli: Iingcamango zemifanekiso eqingqiweyo kuba yongeza imbonakalo ye-pastel.
AmaroSebenzisa ukujolisa embindini ukongeza ukukhanya kwifoto.
Rise: Ngelixa ubonisela ukukhanya okuthambileyo komxholo, yongeza uhlobo lokukhanya kumfanekiso.
Sierra: Bonisa ukujonga okufipheleyo kunye nokugudileyo kwifoto.
ISutro: Ukunyusa ukubonakalisa kunye namathunzi amakhulu, kugxilwe kwimibala emfusa kunye nantsundu nokutshisa imiphetho yomfanekiso.
1977: Inika ifoto umbala opinki, oqaqambileyo kwaye oqaqanjelweyo ngenxa yokubonakala ngesixhobo esibomvu.
Phakathi kwezona zisetyenziswayo
Ukucofa: Yandisa ukukhanya kunye nomfanekiso ngokuchukumisa kancinci kokucekiswa.
I-Valencia: Ukushisa kunye nokwandisa ukubonakaliswa kwemibala, ukuncipha kunye nokunika ukuthinta kwakudala kumfanekiso.
Hudson: Ngomdaka obandayo kunye neziko ledatha ulawula ukwenza i-icry iray ngamathunzi aqatha.
UKelvin: Inika ukukhanya okuqaqambileyo okwandisayo kunye nobushushu.
Lo-fiYongeza izithunzi ezomeleleyo usebenzisa i-saturation kunye nokufudumeza ubushushu, ngaloo ndlela ucebisa umbala wesithombe.
Hefe: Ifana kakhulu ne-Lo-Fi kodwa ayibalulekanga kangako kwaye inika umahluko ophezulu kunye nokuhlala.
Isixhobo: Ine-vignette ebabazekayo kwaye ibangela ukuba isikhungo somfanekiso sitshiswe.
Amehlo: Inika ukujonga uthuli kunye nevintage kwifoto.
UClarendon: Kwindawo yokuqala yayisiphumo kuphela iividiyo, koku izithunzi ziyanda kwaye zikhanyisela imbonakalo.
ECairo: Inika i-etyheli kunye ne-vintage hue.
I-Buenos Aires: Ithoni emnyama yohambo kwaye uphucula izibane.
Lagos: Ngethoni etyheli ithambisa ifoto.
Oslo: Hambisa izithunzi.
Inew york: Ukuphucula iithoni ezimnyama, ukudala umphumo we-vignette emnyama.
IsiTokyo: Inika ukujonga okumnyama nokumhlophe.
Abu DabiQhakamisa iithoni eziphuzi ngelixa uthambisa umfanekiso.
IRio de Janeiro: Ingcolisa umbala omfusa kunye ophuzi enika isiphumo semibala.
Melbourne: Thambisa ifoto ngelixa unciphisa i-satellite.
EJakarta: Yongeza ukukhanya kwezibane kwaye unike ithoni ephuzi.
Impembelelo ukuba i-Instagram ivelise ukususela ekudalweni kwayo
Kunyaka wayo wokuqala ifikelele kwinqanaba le-27 yezigidi zabasebenzisi, ebonisa amanani oko Yakhawuleza yaba yenye yeapp ezithandayo kubantu abaninzi. Kodwa nge-Meyi ye-2012 yarekhodwa ukuba iifoto ze-58 yesibini zazilayishwa kwaye omnye umsebenzisi wongezwa kwisicelo, ukuze imifanekiso engamawaka ezigidi efakwe kwiqonga sele idlulisiwe.
Kwakukho nomsitho obonisa ukuthandwa kwe-Instagram, imvumi yaseNgilani uEllie Goulding waxhasa iklip yevidiyo ngo-Agasti 9 we-201, eyayineefoto ezigciniweyo nezihluzo nje zenethiwekhi yoluntu. Ukongeza ividiyo ihlala phantse imizuzu ye-4 apho kusetyenziswa iifoto ezahlukeneyo ze-1.200.
Kwi-27 yangoFebruwari we-2013, kwabhengezwa ukuba i-Instagram sele inezigidi ezingaphezu kwe-100 yabasebenzisi abasebenzayo kwaye inani labo lalisanda mihla le. Ngokuphathelene noku, Kunyaka olandelayo i-300 sele inezigidi zabasebenzisi abasebenzayoOko kukuthi, ubuncinci ukunyuka kwaboniswa kwizigidi zabasebenzisi be-10 ngenyanga. Ngenxa yoko, kwi-2018 le nethiwekhi yezoluntu idlule ngaphezulu kwesigidi se-1.000 yabasebenzisi abasebenzayo.
Kwelinye icala kuqikelelwa ukuba ukukhula kwe-Instagram kunento yokwenza nezinto eziqhubekayo ezibandakanyiweyo kwiqonga kwiminyaka edlulileyo.
Namhlanje kunye ne-9 iminyaka emva kokuyilwa, i-Instagram ithathwa njengesicelo sesibini esithandwayo kwaye sisetyenziswe emva kwe-Facebook. Ngapha koko, inani elihambelana nenani labasebenzisi kwinani leefoto ezilayishwe umzuzwana kwinethiwekhi yoluntu lihlala lisanda. Kwaye kukuba kuwo wonke umhlaba Unokufumana abantu abasebenzisa eli qonga imihla ngemihla.
Iphantse ibe yinto eqhelekileyo ukuba abantu abaninzi bavuke kwaye baye kwi-Instagram baphonononge zonke iindaba ngaphambi kokuqala imisebenzi yabo yemihla ngemihla, njengokuya emsebenzini. Kuyenzeka imeko yokufika kusuku oluxakekileyo kwaye uhlale okanye ulale phantsi ukuze ubukele yonke imixholo abantu kunye namaphepha owalandelayo. Ngendlela efanayo, iimpembelelo abanye abasebenzisi abaye banazo kwiimpapasho zethu ziyaqwalaselwa.
Kwaye ngalo lonke uhlaziyo olune-Instagram phantse akunakwenzeka ukuba ube nesithukuthezi kuyo. Ngapha koko enye yezona zisetyenziswayo mihla le ngamabali, ngenxa yobunjalo kunye nokuzonwabisa okunikezelwa ngulo msebenzi, apho unokulayisha khona imifanekiso, iifoto kunye nevidiyo ngalo lonke uhleko kunye nokukhumbula kwakhona okwenziwe kweli candelo. Olunye uphawu olitsalela ingqalelo yabantu abaninzi kukungazi okubonakalisayo, kuba la mabali anyamalala emva kokuba i-24 idlulile iiyure zokupapashwa.
I-Instagram kunye neempawu
Kwimeko yokuba uneakhawunti yeshishini kwaye ufuna ukuba unxibelelwano rhoqo kunye nentengiso yeemveliso zakho, ngaphandle kokungena ngokusesikweni, ungasebenzisa amabali kwi-Instagram kakhulu ukwenza iimpapasho ezilula apho udlulisela umyalezo ngokucacileyo kwaye ubonise yonke into oyifunayo Abaphulaphuli bakho bajonga uphawu lwakho. Kodwa ngaphandle kokwenza inkcazo eneenkcukacha ukufikelela abaphulaphuli bakho, Ukongeza ekukunikeni amandla okufaka umxholo omninzi yonke imihla kwaye ungaphoswa yiakhawunti yakho nangayiphi na imini.
I-influencer ifumene ukuthandwa kwi-Instagram, kuba le sicelo Kukunika zonke izixhobo kunye nokuba nako ukufikelela kwiindawo ezininzi ngendlela elula, ngelixa amanye amaqonga kufuneka ulandele uthotho lweeprotocol zokufuna.
Yiba yividiyo, iifoto okanye imifanekiso, aba bantu banikezelwe ukulayisha umxholo kwi-Instagram ethimba ingqalelo yabasebenzisi abajonga iiposti zakho. Kumele kuqatshelwe ukuba phakathi kwezihloko ezinokubonwa kakhulu ezinokuthi zithathwe ngabantu ukuze bazuze ukuthandwa ziintsomi, ukhuthazo, ukomelela komculo kunye nevidiyo zokucula.
Kumaxesha amaninzi aba baphembeleli bazuze udumo nolwamkelo oluvela eluntwini lokuba benza ikonsathi, udliwanondlebe kunye nokutyikitywa kwe-autograph kwihlabathi liphela. Kodwa ezi zinto ziphunyeziweyo ziziphumo zomsebenzi omninzi kunye nokufundwa kwazo zonke iimpapasho ezizayo kunye nokuphinda kubekhona kubasebenzisi abayekayo ukusabela kwimixholo yabo, eqinisekisa ukuba injengokubona, njengokuzihlaziya nokugcina umgangatho kunye nemvelaphi.
1 I-Instagram yenethiwekhi yoluntu
1.3 Phakathi kwezona zisetyenziswayo
1.4 Iifilitha zamabali e-Instagram
2 Impembelelo ukuba i-Instagram ivelise ukususela ekudalweni kwayo
3 I-Instagram namhlanje
3.1 I-Instagram kunye neempawu
3.2 Impembelelo ye-Instagram
Xa i-Instagram isithi iyasebenza ngoku